Madaxweyne Geelle oo booqday Qaahira - Muxuu kala hadlay Al-Siisi?
Al-Siisi iyo Geelle
Madaxweynaha Masar ayaa Isniintii marti-geliyey dhiggiisa Jabuuti oo ay yeesheen wada-hadallo lagu horumarinayo xiriirkooda iyo biyo-xireenka muranka uu ka taagan yahay ee Ethiopia ay ka dhiseyso Webiga Nile, kaasi oo Masar ay u aragto halis.
Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa Axaddii cago-dhigtay magaalada Qaahira, waxaana garoonka ku qaabilay madaxweyne Cabdifataax Al-Siisi.
Madaxweynayaasha Masar iyo Jabuuti ayaa sidoo kale ka wada-hadlay ammaanka Badda Cas iyo Geeska Afrika, sida uu sheegay Al-Siisi oo aan bixin faah-faahin dheeraad ah.
Madaxweyne Geelle ayaa ku qeexay wada-hadallada “kuwa wax ku ool oo miro dhal ah,” isaga oo sheegay inay ka wada-hadleen habab “lagu xoojin karo laguna horumarin karo xiriirka.”